Wonder – Myanmar
၀က်ခြံတစ်ဖု ညှစ်လိုက်ရသလို ခံစားရမယ့် ကိတ်မုန့်အမျိုးအစား စတင်မိတ်ဆက်
ကိတ်မုန့်တွေဆိုတာကတော့ လူတိုင်းစားဖူး မြင်ဖူးနေကြပုံစံတွေပါဘဲ။သို့သော်လည်း ဒီတခေါက်ပြမယ့် ပုံစံကိုတော့ တော်တော်များများ မမြင်ဖူး မစားဖူး ဖြစ်မှာအမှန်ပါဘဲ။ကယ်လီဖိုးနီးယားက ကိတ်မုန့်ဖုတ်တဲ့ ဆိုင်တစ်ခုကတော့ ရိုးရာ ကိတ်မုန့်ပုံစံကို အနည်းငယ် ရောနှောပြီးတော့ ၀က်ခြံဖုကို ညစ်နေတဲ့ ပုံစံနှင့်တူအောင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။တကယ်ကို ၀က်ခြံပုံစံအတိုင်း ထုတ်ထားတဲ့ ကိတ်မုန့်ပါဘဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိတ်မုန့်ရဲ့ အလယ်ကို […]
Bojana Danilovic လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ လူ ဆယ်သိန်းမှာ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲလှတဲ့ ရောဂါဆန်းတစ်မျိုးကို ခံစားနေရပါတယ် ။ ဒီရောဂါကတော့ ဘယ်အရာကို မဆို ပြောင်းပြန် မြင်နေရတာ ဖြစ်ပြီး ဒီရောဂါကိုတော့ Spatial orien-tation phenomenon ဟုခေါ်ပါတယ်။ ဆားဘီးယားနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ထိုအမျိုးသမီးဟာ ဦးနှောက်ပိုင်း […]
သတင်းပေးပို့ချက်အရ နှစ်ပေါင်းရှစ်ရာခန့် သက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကို Australia မှာ တွေ့ရှိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီဖုန်းရဲ. အသွင်အပြင်ဟာ Nokia 3310 နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူပြီး ဖုန်းပေါ်ကစာသားတွေကို လူသားတွေ နားလည်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပညာရှင်တွေကတော့ ဒါဟာ ကမ္ဘာမြေကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ ဂြိုလ်သားတွေရဲ. […]
သုတေသနပြုလုပ်သူတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၁၅၀၀ကျော်က မံမီရုပ်အလောင်းတစ်ခုမှာ Adidasရဲ့လိုဂိုပါတဲ့ဖိနပ်တစ်စုံကိုစီးထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ မွန်ဂိုလီးယားက ပေပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ Atlai တောင်တန်းပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မံမီရုပ်အလောင်းရဲ့ ခြေထောက်နဲ့လက်ကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူတွေကတော့ အချိန်ခရီးသွားခြင်းကတကယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဒီအပေါ်မှာ မှတ်ချက်မပေးလိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတွေ့ရှိမှုအတွက်တော့ အရမ်းပဲဝမ်းသာကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားဒေသတွေမှာ သူတို့လေ့လာခဲ့သမျှထဲမှာ အထူးခြားဆုံးရှာဇွေတွေ့ရှိမှုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “ဒီအမျိုးသမီးဟာ […]
ကတုံးကနေမီးခိုးထွက်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခရက်ကစ်ကစားသမားရဲ့ဗီဒီယို
ခရစ်ကတ်အားကစားဆိုတာကလည်း ဒီအတိုင်းကြည့်နေရင်သာလွယ်တာ။ တကယ်ဆော့တဲ့သူနေရာကနေကြည့်ရင် အရမ်းပင်ပန်းတဲ့ အားကစားတစ်မျိုးပါ။ ကိုယ့်လူက ဘယ်နားကို ဘောလုံးရိုက်လိုက်သလဲ၊ ဘယ်နားကိုရောက်အောင်ရိုက်ရမလဲ၊ ကိုယ့်လက်ထဲဘောလုံးရောက်လာရင် ဘယ်နားကို ပစ်ရမလဲ အစရှိသဖြင့် တော်တော်တွက်ချက်ရပါတယ်။ ဘောလုံးရိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အသည်းအသန်ကို ပြေးရပါတယ်။ ဒီလို ခရစ်ကတ်ကစားသမားတွေထဲကမှ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခရစ်ကတ်ကစားသမားတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒီခရစ်ကတ်ကစားသမားရဲ့ နာမည်ကတော့ Chris […]
မြေမြုပ်သဂြိုလ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးအား ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပြန်လည်တွေ့ခဲ့တဲ့အမျိုးသား
တကယ်ကို ကြောက်စရာကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။သေရွှာပြန်ဆိုတာရှိသော်လည်းပဲ မြေမြုပ်သဂြိုလ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်သေယောက်ဟာ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာရင်တောင် ရှင်သန်ဖို့ကမလွယ်လောက်ပါဘူး။အောက်စီဂျင်ပြတ်ပြီး မိနစ်ပိုင်အတွင်းသေသွားစေနိုင်လို့ပါ။ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ။လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်အကြာက ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် မြေမြုပ်သဂြိုလ်ခဲ့သော ဇနီးဖြစ်သူအား ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွင် တွေ့ရှိလိုက်ရသောအခါ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကာဆာဘလန် ဆေးရုံတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြင့် အမည်မသိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး […]
အမေရိကန်နိုင်းငံ မေရီးလင်းပြည်နယ်သူ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် လူမဲ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် နယူးရော့ခ်မှာ အပ်ပုန်းထိုးတဲ့ သူနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး တင်ပါးကိုပိုကြီးလာအောင်ဆေးထိုးပြုပြင်ကုသမှု ခံယူပြီးတဲ့နောက် ဆေးဆိပ်တက်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မေရီလင်းပြည်နယ်နေထိုင်သူ ကယ်လီ မှု ဆိုသူဟာ ဆေးထိုးကုသမှု ခံယူဖို့ သူမ မိခင်နဲ့အတူ Queens ကို […]
တရုတ်ပြည်မှာကတော့ ထူးဆန်းတဲ့ သေရွာပြန်အဘိုးအိုတစ်ယောက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအဘိုးအိုကတော့ အသက် နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Huang Mingquan ဖြစ်ပါတယ်လို့လဲသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကတော့ လူအများကို အင်မတန် အံ့သြမှင်သက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ Huang ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့လလောက်ကတည်းက အစာမဝင်တော့ဘဲ ဆန်ပြုတ်သာစားနိုင်တော့တယ်လို့သိရပြီး ထိုအဘိုးအိုဟာ အသက်ရှူရပ်တန့်သွားသလို ၊ခြေဖျားလက်ဖျားတွေလည်း အေးစက်နေတာကြောင့် သားဖြစ်သူနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက သေဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ အသုဘဝန်ဆောင်မှုအသင်းကနေ အခေါင်းလှလှလေးတစ်လုံးငှားပြီး […]
ထူးဆန်းတဲ့အဖျားရောဂါကြောင့် တစ်ခါအိပ်တိုင်း နှစ်လအထိကြာတဲ့ မိန်းကလေး
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် Sharik Tovar အမည်ရ ကောင်မလေးဟာ ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ အဖျားရောဂါကြောင့် တစ်ခါအိပ်ရင် နှစ်လလောက်ထိ ကြာတတ်ပါသတဲ့။ ဒီအတောအတွင်းမှာ Tovar ရဲ့မိခင်က သူမကို အစားအစာကို အရည်ပြုလုပ်ပြီး နှစ်နာရီခြားတစ်ခါ ကျွေးရပါတယ်။ Tovar ကို မီဒီယာတွေက Sleeping Beauty လို့ […]
ဒီရုပ်သံထဲမှာ ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ မိန်းမငယ်လေးကတော့ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ8ထည်လုံးကို တစ်ကြိမ်ထဲ ကောက်ဝတ်ပြီးနောက်ခိုးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက ဖမ်းမိပြီး video ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ Video ထဲမှာတော့ မိန်းမငယ်လေး ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် တစ်ထည်ပြီးတစ်ထည် ချွတ်နေခဲ့တာကို လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက video ရိုက်ကူးရင် အသံအကျယ်ကြီးဖြင့် ရေတွက်ပြနေခဲ့တာပါ ။ မိန်းကလေးဟာ […]